Madaxweyne - Wikipedia
Madaxweyne (Reer aw xasan waa beel kamid ah‎; Af-Taliyaani : presidente; Af Ingiriis : president) waa madaxa ugu sareeya ee dowlada wadan ama dal. Sida caadiga ah, madaxweynuhu waxa uu madax u yahay dhamaan xubnaha dowlada oo dhan. Waxaa mararka qaar dhacda in ra'iisul wasaaruhu ka awood sareeyo madaxweynaha. Si kastaba ha ahaatee, madaxweynuhu waxaa inta ugu badan ku soo baxaa doorasho shacabka ama golle.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Madaxweyne&oldid=166305"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 10 Febraayo 2017, marka ee eheed 15:28.